निर्मलाका हत्यारा भेटिन १२ वर्ष लाग्न सक्छः प्रधानमन्त्री - hamro Desh
निर्मलाका हत्यारा भेटिन १२ वर्ष लाग्न सक्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अमेरिका पुगेका बेलामा पनि निर्मला हत्या प्रकरणको प्रश्नले लखेटेको छ । अमेरिकामा अन्तरवार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मला हत्याको प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो । प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कार र हत्या सरकारले गरेको होइन भन्दै यस्ता घटनामा अपराधीहरु पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्ने बताए ।
यो सँगसँगै सामाजिक जागरणका लागि, समाजको नैतिक उत्थानका लागि ध्यान दिनुपर्दैन ? सामाजिक सञ्जालका नाउँमा, यस्ता साइटहरु मार्फत अत्यन्त घीनलाग्दा अपराधहरु फैलाउने …।
सरकार एकदम ठ्याक्कै सफल भयो भन्न त म भन्दिनँ । किनभने सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । कोशिस गरिराखेको छ । तर, कहिले कहिले यस्ता घटनाहरु पत्ता लगाउन अलि समय लाग्छ । त्यसलाई विषय बनाएर यही सरकारले नै यो अपराध गराएको हो जस्तो गर्न खोज्ने भनेको त विषयविहीनताको, विषयको दरिद्रताको र संस्कार दरिद्रताको स्थिति हो । जहाँसम्म घटनाको कुरा हो, घटना अत्यन्त दुःख हो । चिन्ताजनक यसकारण छ कि यति नैतिक मूल्यमा नेपालजस्तो देश, नेपाली हुँ भन्नेहरु यति तल गिर्नु भनेको दुःख कुरा हो । यसलाई उठाउनुपर्छ ।
केही मान्छेहरु सबै काम छाडेर यसैमा लागेका छन् । जसरी पनि विरोध गर्ने । तिनको सम्बन्धमा त मलाई केही टिप्पणी गर्नु छैन । तपाईले हेर्नुभयो भने ‘यो सरकारले के गर्दैछ, हत्या हिंसा बलात्कार गर्दैछ…’ के यस्तै हो र ? के यो सरकारले हत्या हिंसा र बलात्कार गरिाखेको छ ? यस्ता बकबास गर्ने बकबासीहरुका सम्बन्धमा त हामीले केही कमेन्ट गर्नु छैन ।
हामी राज्य संयन्त्रलाई सबल बनाउँछौं । सामाजिक नैतिकताको धरातल जुन खस्किँदो छ, त्यसलाई माथि उठाउँछौं । राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक उचाइ र स्तर यति तल खसेको छ, त्यसलाई उठाउनुपर्ने छ । जे पनि बोकेर हिँड्ने । राजनीतिक पार्टीहरुका राजनीतिक एजेण्डा छैनन् । कुनै विषय छैनन् । राष्ट्र निर्माणका कुनै विषय छैनन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्केतिक कुनै विषय छैनन् । अनि के भेटिन्छ भन्दाखेरि मुसाले चामलको बोरामा प्वाल पार्‍यो अरे भन्ने सुन्यो भने ल यस्तो सरकार ! मुसाले चामलको बोरामा प्वाल पारुञ्जेल के हेरेर बस्यो ? नालायक सरकार भनेर कराउने । योखालको राजनीतिक संस्कृति जुन छ, यो एकछिनका लागि हो । दयालाग्दो संस्कृति हो यो । यसलाई संस्कृतिका रुपमा जो उठाउन खोजेका छन्, केही अर्थ छैन यसको । अनलाईन खबर बाट